Sary 69 tokony ho hitanao alohan'ny hahafatesanao | Famoronana an-tserasera
Tao an-tanantsika efa-jato taona teo ho eo ny fakantsary. Azonao an-tsaina ve hoe firy ny zavatra hitan'ny maso manerantany? Fandripahana olona, ​​fifandrifian-javatra, zavatra hita, fanamby, fitiavana ... Saripika iray alina ny sary, fa inona no azonao lazaina amiko raha mitondra sary tsy mampino 69 avy amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona aho? Azo inoana fa nahita ilay hafahafa ianao na hoe tsy mahita sary hafa ianao, raha izany dia lazao amiko amin'ny hevitra iray. Avelako izy ireo, Manantena aho fa mankafy azy ireo ianao!
Amin'ity sary ity dia hitantsika ny safidy hafa taloha izay ampiasain'ny ray aman-dreny maro hitaterana ny zanany. Nandefa azy ireo tamin'ny alàlan'ny mailaka izy ireo! Ity safidy ity dia mora vidy kokoa noho ny hafa rehetra, satria ny tombo-kasen'izy ireo ihany.
Eto ianao dia manana ny sarin'ilay lehilahy misy volombava lava indrindra eo amin'ny tantara, tsy misy mihoatra ary tsy ambany noho ny 1,4 metatra. Nanana fiafarana mahatsiravina izy, maty nanitsaka ny volombavany sy namaky ny hatoka.
Azo antoka fa nanao lalao tonga lafatra ireto namana roa ireto. Ny iray tamin'izy ireo dia tsy nanana tongotra ary ny iray hafa tsy nanana sandry, ka dia tonga mpinamana tsy misy fepetra izy ireo ary tsaroana tao anatin'ny tantaran'ny tantara.
Ity sary manaraka ity dia mampiseho ireo mpikambana ao amin'ny tarika mozika izay nijanona nilalao hatramin'ny farany nandritra ny nilentahan'ny Titanic.
Fomba mahasosotra hanaratra, sa tsy izany?
Fampitahana ny isa navoakan'i Beethoven tenany sy Justin Bieber iray hafa, marina ve fa mivoatra ny olombelona rehefa mandeha ny fotoana?
Sarin'i Anna Frank miaraka amin'ny namany milalao anaty boaty fasika.
11 septambra 2001. Fiaramanidina roa no namely ny tilikambo kambana, maro no afaka nanavotra ny ainy, fa ny hafa kosa tsy nahafehy ny toe-javatra ary niafara tamin'ny fihanaky ny tranobe.
Sarin'ny mpizahatany iray eo amin'ny terrasin'ny tranobe alohan'ny hamelezan'ny fiaramanidina azy ireo.
Bill Gates mihetsika amin'ny fihetsika somary hafahafa.
Bob Marley tsy misy dreadlocks.
Fitaovana ampiasaina amin'ny fihazana bera any Siberia.
Tsy hino izany ianao, fa i Chaplin ity lehilahy ity tsy misy volombava na makiazy.
Charles Chaplin manoloana ireo mpankafy azy any New York.
Fiara Hippo tamin'ny taona 20.
Saron-tava gazy Mickey, tolo-kevitra Disney.
Fananganana ny Tower Eiffel.
Fanamarihana any an-tsekoly Einstein.
Sekolin'ny baleta nohatsaraina amin'ny sisa tavela amin'ny tanàna iray potiky ny ady.
Spielberg miaraka amin'i ET mandritra ny sary.
Kisoa lehibe indrindra eto an-tany (liger, mifangaro liona sy tigra).
Hetsika Power Flower.
Mpaka sary naka sary iray amin'ny trano fanaovana tazom-borona any New York eo am-pananganana manodidina ny 1905.
Fanazaran-tena amin'ny soccer amin'ny moto.
Mpiasa vavahady volamena any San Francisco.
Soritry ny fitifirana tany Liberia taorian'ny ady an-trano.
Hitler hatramin'ny fahazazany.
M. Teresa avy any Calcutta tamin'ny fahazazany.
Robert Wadlow, ilay olona lava indrindra teo amin'ny tantara tamin'ny 2,72 m.
Ny fifohazan'i Hachico, tadidin'ny fahatokisany ny tompony.
Olona namboarina ny dian-tànana. Tsy nifanaiky izy ireo fa nanaiky ny anarany sy tao amin'ilay fonja ihany.
Fandraisana an-tsoratra ny lohatenin'ny Star Wars.
Michael Jackson sy Michael Jordan mandihy.
Cage izay nampiasaina hitondrana ny ankizy amin'ny rivotra madio rehefa tsy nisy terrasse.
Jimi Hendrix miaraka amin'ny gitara elektrika voalohany.
Sarin'i Machu Picchu taorian'ny nahitana azy.
Zaza nifikitra tamin'ny tanan'ny dokotera rehefa avy nanao «incision».
Akanjo Mickey sy Minnie ao Disneyland.
Kennedy fotoana fohy taorian'ny nahazoany ny tifitra izay nahafaty azy.
Ny oram-panala ihany no teo amin'ny tantaran'ny tany efitra Sahara, 1979.
1950, zazavavy Eskimo niaraka tamin'ny alikany.
Ankizy taorian'ny loza nitranga tany Haiti.
Ankizy amerikana miakanjo amin'ny Halloween.
Ankizivavy naratra nandritra ny horohorontany tany Haiti.
Voromailala misy fakantsary.
Sisan'ny mpivady ao Iran.
Sary hoso-doko mazava Paul Picasso miaraka amin'ny hafainganam-pandeha miadana miadana.
Dian-tongotra amin'ny dia voalohany mankany amin'ny volana.
Bunnies Playboy tamin'ny taona 60.
Ny polisy dia miantoka fa manao akanjo milomano mifanaraka amin'izany ny mpandroba ary mifanaraka amin'ny refy.
Fiaramanidina moto voalohany teo amin'ny tantara.
Fampisehoana voalohany nataon'ny Rolling ho vondrona natambatra.
San Francisco taorian'ny horohorontany tamin'ny 1906.
Reno mijery ny baomba tamin'ny Ady lehibe II.
Nap teo afovoan'ny fananganana trano fanaovana trano taorinan'ny taona 30.
Veloma amin'ny miaramila.
Miaramila mandrehitra sigara amin'ny flamethrower.
Manekinisty Star Wars eo afovoan'ny fanaovana sary mihetsika.
Ireo tafavoaka tamin'ny Titanic, sary voalohany.
Steven Spielberg dia naka sary niaraka tamin'ny antsantsa miraikitra teo amin'ilay sarimihetsika Jaws.
Saripika farany an'ny tigra Tasmanianina talohan'ny nahalany tamingana azy tamin'ny 1933.
Sary farany nalaina tao amin'ny Titanic.
Ireo mpihazakazaka mifoka sigara eo afovoan'ny Tour de France.
Mpiasa Disneyland miala sasatra sy misakafo.
Mpiasa Titanic mibanjina azy io.
Mijanona eo amin'ny làlambe lehibe iray any New York ny fifamoivoizana mba hiampitan'ny saka ny arabe. 1925.
Sary farany an'i Anna Frank.
Kiraro izay nampiasain'i Michael Jackson hanaovana ny iray amin'ireo choreograpie-ny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Sary 69 tokony ho hitanao alohan'ny hahafatesanao
Jos23 dia hoy izy:
Ilay iray amin'ireo mpizahatany eny an-tampon'ny Tower dia voaporofo fa sandoka.
Valiny tamin'i Jos23
JAYA84 dia hoy izy:
Fa maninona io sarin'ilay alika Andalusia io?
Valiny amin'i JAYA84